Alshabaab oo dib u qabsaday deegaan istiraatiiji ah | KEYDMEDIA ONLINE
Alshabaab oo dib u qabsaday deegaan istiraatiiji ah
Ciidamada Dowladda ayaa isaga baxay deegaanka Jannaa Cabdalla, waxaana Isla markiiba dib u qabsaday Ururka Al-Shabaab oo meel aan ka fogeyn ku sugnaa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dagaalyanada Al-shabab ayaa dib u qabsaday deegaanka Jannaa Cabdalla oo qiyaastii 60KM u jira magaalada Kismaayo, kadib markii ay banneeyeen ciidamada dowladda ee Danab iyo kuwa Mareykanka ah oo is garabsanaya.
Deegaankaan ayaa istiraatiiji u ah isku xirka magaalooyinka Kismaayo, Afmadow, Dhoobleey iyo Qooqaani, waxaana la sheegaya in ka bixitaanka ciidamada dowladda ee deegaankaan in ay dhabar jab weyn ku tahay howlgalka Melateri ay ciidamada kawadaan Jubbooyinka.
Ciidamada dowladda ayaa shalay isaga baxay deegaanka oo ay labo maalin ka hor qabsadeen, waxaa ayna fariisin ka sameysteen Tuulada Lafaha Hartiga oo ku taallo inta u dhaxeyso Canjeel iyo Jannaa Cabdalla, xigtana dhinaca Kismaayo.
Al-Shabaab ayaa maalin ka hor weerar ismiidaamin ah ku qaaday fariisinta ay ciidamada Dowladda iyo kuwa Mareykanka ka sameysteen Jannaa Cabdalla, waxaana ku dhintay tiro ah askar ah, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay hal askari oo Mareykan ah, sida taliska laga soo xigtay.
Arintaan ayaa waxaa niyad jab kala kulmay shacabka deegaanka oo markii hore ku farxay soo dhaweynta ciidamada dowladda, haseyeeshee saacado kadib uga baxay magaalada, Al-Shabaabna ay ku soo rogaal celiyeen.